Ukukhetha izincedisi zeebhayisekile zaBakhulileyo ukuphucula indlela yakho yokuhamba - Iinkonzo Zematriki Citizen Services
Ukukhetha izincedisi zeebhayisekile zaBakhulileyo ukuphucula indlela yakho yokuhamba
Ukuhamba ngebhayisikile lukhetho oluphezulu kubantu abaninzi abanethemba lokudibanisa umthambo nokuzonwabisa, kunye nezinto ezifanelekileyo zebhayisekile zabantu abadala, abantu abangaphezulu kweminyaka engama-55 banokungena kulonwabo. Ukufumana izixhobo ezifanelekileyo zokuhamba ngebhayisikile kunokwenza ukuba ukukhwela kube lula ngakumbi, kukhuseleke kwaye kumnandi kubantu abakhutheleyo.
Ingumbono olungileyo ukujonga kwizincedisi zokubamba ukuba ukhwela ibhayisikile yakho ixesha elide, unemicimbi edibeneyo, uhlala utyhafiswa kukuzikhathaza kakhulu, okanye une-arthritis. Ezi zixhobo zinokwenza ukuba ukuhamba ngebhayisikile kube lula ngakumbi.
Imifanekiso yeZimvo zokuZilolonga eziPhezulu
Iingcebiso zeFashoni ePhakamileyo
Iinwele ezithandwayo zeenwele zesilivere
Ukubamba kwenza ukubambelela kwiziphatho zikhululeke ngakumbi, ngakumbi ukuba unemicimbi yokubamba okanye unamalungu omzimba. Xa ukhetha ukubamba, qiniseka ukuba uthenga into ephawula isitayile se-ergonomic. Ngale ndlela, uya kuziva ukhululekile ukubambelela njengoko ziyilelwe ukumila kunye nokuhamba kwesandla engqondweni. Ukubamba iindleko kubiza naphi na ukusuka kwi-15 ukuya kwi-80 yeedola ngokuxhomekeke kwisitayile, uphawu, kunye nenqanaba lokukhutshelwa ongathanda ukuba nalo. Ezi zinokuthengwa kwi-intanethi okanye kwivenkile yebhayisekile yendawo yakho. Olunye ukhetho olukhulu lubandakanya:
indlela yokwenza ityuwa nepepile iinwele zikhanye
Iintlanganiso zeNdibano zebhayisekile iindleko ezijikeleze i- $ 16 kwaye zisebenza kakuhle ngeebhayisikile zeentaba, iibhayisekile zendlela, kunye neebhayisikile zabahambi.
I-Ergon ibonelela ngeetoni zokhetho zokubamba ezisukela kwi- $ 30 ukuya kwi-90 yeedola. Nangona kuthengiswa ikakhulu kubahambi beentaba nababaleki, ezi zinto zingasebenza ziya kusebenza kakuhle nakwiibhayisikile zabahambi.
Ukwandiswa kwebarbar kungafakwa kwiibhayisikili ukwenzela ukudala indawo engaphezulu yokubeka iifowuni, izixhobo zeGPS kunye nezibane. Ezi mpawu zokhuseleko zinokufika ziluncedo ukuba ucwangcisa ukukhwela kwindawo erhabaxa okanye ngexesha lokungabikho kwemini. Izandiso zinokubiza malunga ne- $ 4 ukuya kwi- $ 20 kwaye kungathatha ixesha ukuyifaka. Ukuba uthenge kwivenkile yebhayisikile yasekuhlaleni, umqeshwa unokukunceda ekufakeleni ulwandiso lwesiphatho. Ezi zikwayimveliso elungileyo ukuba ubenamava emicimbi yezonyango kwixa elidlulileyo kwaye kufuneka uphathe ifowuni xa ukhwele kwiinjongo zokhuseleko. Olunye ukhetho lubandakanya:
Ulwandiso lweGearbest Handlebar Ixabisa malunga ne- $ 4 kwaye iza nemibala eyahlukeneyo kunye nokukhetha.
I-Topeak Bar eyandisiweyo Ixabisa malunga ne- $ 17 kwaye ilula kakhulu.
IiRalos Aluminium Handlebar Extender
Izihlalo zebhayisekile zaBadala
Ukufumana isihlalo esikhulu sebhayisikile kunokwenza ukuba ukuhamba ngebhayisikile kube lula ngakumbi kwaye kunciphise uxinzelelo lwasemva ngexesha lokukhwela kwakho. Ukuba kunokwenzeka, vavanya izihlalo ezimbalwa ukuze ubone ukuba yeyiphi eyona isebenzayo kuwe. Khangela isihlalo esikhulula uxinzelelo, uzive ukhululekile, kwaye ubanzi ngokwaneleyo ukuba uhlale kuso ixesha elide. Oku kuya kukunika ukhetho ngakumbi xa kuziwa ekusebenziseni ibhayisekile yakho. Izihlalo zebhayisekile zinokuxabisa ngaphezulu kwe- $ 30, ke thatha ixesha lakho ukufumana eyona nto iziva ilunge kuwe. Ezinye zezona zikhulu zibandakanya:
Isitulo sebhayisekile seBikeroo sabadala Iindleko ezijikeleze i-40 yeedola, isetiwe ngokubanzi kwaye ine-cushioning eyongezelelweyo yokunciphisa uxinzelelo lwangasemva.
Khetha i-Cruiser yeLifu 9 lukhetho lwe-unisex olubiza malunga ne-32 yeedola, lwenziwa nge-gel cushioning, kwaye luthomalalise uxinzelelo olusemva kunye nomsila wethambo.
Ukukhwela umnqwazi okulingana ngokufanelekileyo ukunciphisa amathuba akho okulimala ngama-50% okwenza ukuba kube yimfuneko xa kufikwa ekukhweleni ngokukhuselekileyo. Fumana isigcina-ntloko esinomoya wokungenisa umoya ukuze uhlale upholile kwaye ukalwe kakhulu ngokokhuseleko. Iihelmet zinokufakwa ngokufanelekileyo kwivenkile yebhayisekile yasekuhlaleni. Ukuba unayo isigcina-ntloko esele sikhona, qiniseka ukuba siyangena snuggly kwaye sikhululekile. Isigcina-ntloko sakho akufuneki sikhululeke ngokwaneleyo ukuba singawa okanye sibhabhe kuwe. Ihelmethi zinokubiza malunga ne-25 ukuya kuma-200 eedola kuxhomekeka kwisitayile ongathanda ukusisebenzisa. Ezinye iindlela ezinokulinganiswa zibandakanya:
Isigcina-ntloko seBhayisekile yeBell ikalwe kakhulu, ixabisa malunga ne- $ 30 kwaye iza ngeendlela ezahlukeneyo zokhetho.
Isigcina-ntloko seGiro Ixabisa malunga ne- $ 50, ilula, kwaye iza nemibala eyahlukeneyo.
Usetyenziso lweeBhotile zamanzi
Ukuba nesiphatho sebhotile yamanzi ngumbono olungileyo njengoko uninzi lwabakhweli lunokufumana ukomisa emzimbeni kukukhwela ixesha elide, okanye kwimozulu eshushu. Ukuhanjiswa kwamanzi kubaluleke ngakumbi kubantu abadala njengoko ukunqongophala kwayo kunokubangela ukuba nesiyezi, ukudideka, ukuxinana, nokudinwa. Oku kunokunyusa umngcipheko weengozi ezinxulumene nebhayisikile okanye ukulaliswa esibhedlele. Qiniseka ukuba usele amanzi amaninzi ngaphambi kokuba uhambe ngebhayisikile kwaye uthathe isixa esaneleyo samanzi kunye nawe. Ezinye zeebhotile ezinkulu zamanzi zibandakanya:
IBontrager ibonelela ngezinto ezininzi zebhotile yamanzi ezilingana neebhotile zamanzi ezahlukeneyo. Amaxabiso ahluka ukusuka kwi-20 ukuya kwi-80 yeedola.
UShake iibhokisi zebhotile zamanzi yiza ipakethe ezimbini ngeedola ezili-10 kuphela kwaye zilula kakhulu.
Iiphedu zebhayisekile zinokususwa kwaye zibuyiselwe endaweni yazo ngokulula. Fumana i-pedal esebenza ngokusemgangathweni kuwe kwaye ugxininise ekubeni ungathanda ukuhamba ngebhayisikili ebanzi okanye ufuna izandiso zokuhamba ezihambisa ii-pedals zakho kwiindawo ezibanzi. Izixhobo zokuhambisa okanye ukubuyisela endaweni zisebenza kakuhle kubantu abadala abanesinqe esibanzi, abanamava emadolweni, kunye nonyawo olubanzi. Ukufumana i-pedal efanelekileyo okanye i-accessory inokunceda ukudala induduzo enkulu ngexesha lokukhwela kwakho kwaye ubeke uxinzelelo oluncinci emadolweni akho. Olunye uhlengahlengiso lweephedi kunye nezinto onokukhetha kuzo zibandakanya:
Abaxhasi bePedal Light ebiza i-15 yeedola ukuya kwi-22 yeedola kuxhomekeke kubungakanani kukhetho olukhethiweyo.
Iipali zokuhamba ngebhayisekile yeRock Bros Zibanzi kune-pedal yebhayisekile kwaye zinokusetyenziselwa ukwenza iqonga elinobuchule ngakumbi lokukhwela. Baxabisa malunga ne- $ 22.
Iiglavu zinokunceda ukunciphisa ukutyibilika ngexesha lokukhwela kwakho kwaye wandise isandla sakho kunye nenqanaba lesentuthuzelo ngokubonelela ngokungaphezulu. Banokunceda ekunciphiseni iimpembelelo zokungqubeka endleleni okulungele abo banezandla ezibuhlungu okanye izihlahla, bathambekele kwiifowuni, nkqu nakwisifo samathambo. Iiglavu zinokubonelela ngemfudumalo ngexesha lokukhwela ebandayo kwaye ezinye ziya kususa ukufuma kude ukuqinisekisa ukuba ubambelele ngokuqinileyo kwii-handlebars. Iiglavu zinokubiza naphi na ukusuka kwi-10 ukuya kwi-60 yeedola ngokuxhomekeke kuhlobo kunye nesimbo esikhethiweyo. Olunye ukhetho oluhle lubandakanya:
ungasusa njani ukungunda kumalaphu
Iglavu yebhayisekile yeZokokki Ixabisa malunga ne- $ 10 kwaye inendawo yesundu ethe tyaba kakhulu ebonelela ngokhuseleko olukhulu kumhlaba ombi. Zikwindawo yokufuma nokukhanya.
ILouis Garneau Biogel Iziqhano Iindleko ezijikeleze i- $ 22 kwaye zibonelela umkhweli ngentuthuzelo, ukufunxeka, ukubamba kunye nokuphefumla.
Uhlengahlengiso loLungelelwaniso lohambo oluKhululeke ngakumbi
Xa uthenga ibhayisekile, ufuna ukuqiniseka ukubaifreyimu ilungele isitayile somzimba wakho. Gcinga ezingqondweni:
indlela yokuphelisa ukubola kwebhetri
Uninzi lweebhayisikile zine-bar ehlengahlengayo evumela isali ukuba inyuke okanye yehle ukuze ilungele ngokufanelekileyo. Xa uhleli kwibhayisikile, umlenze wakho kufuneka uphantse uthi nkqo kwi-downstroke, ngokugoba kancinci emadolweni.
Ngokubanzi, ufuna ubuncinci iisentimitha ezimbini zokucaca phakathi kwakho kunye nebha yeebhayisekile (ibar yomnqamlezo edibanisa ibamba yokubamba kwisiqu sokuhlala).
Ukuba unemilenze emide kunye nesifutshane esifutshane, kuya kufuneka uqiniseke ukuba awuthumeli ngokufikelela kwii-handlebars. Isiphatho sakho kufuneka sibe malunga ne-intshi enye ngaphezulu kwempumlo yesihlalo sakho ukunqanda uxinzelelo olusezantsi. Ukuba ukuphakama akulungelanga iimfuno zakho, unokufuna ukuqaphela ulwandiso lwebar.
Ukufumana izincedisi zebhayisekile zabantu abadala
Ngokwesiqhelo, ukukhangela kwi-Intanethi elona xabiso libalaseleyo xa kusiziwa kwizixhobo zebhayisekile kukubheja kwakho okungcono. Ungaya kwivenkile yezitena kunye nodaka ukuze ufunde ngezixhobo ezifanelekileyo kwaye emva koko uthenge izinto kwi-Intanethi ukuba unethemba lokugcina kancinci. Ezi venkile zikwanikezela ngokufanelekileyo Impahla yebhayisekile ukukugcina ufudumele, upholile, kwaye womile njengoko kufuneka.
Ivenkile yeBhayisikile yaseKhaya
Ukuba khange ubekhona esihlalweni okwethutyana, uyakuxabisa ukuhoywa komntu ngamnye ngabakhweli abathandayo abagcina ivenkile. Ukurhweba kukuba amaxabiso ezinto ezindala zebhayisekile zinokuphakama kunakwivenkile ezinkulu okanye kwi-Intanethi. Ezi venkile zikwangindawo ezilungileyo zokufunda malunga neeklabhu zebhayisikile kunye nokudibana kunye nabanye abanomdla.
Ivenkile yesizwe kunye nabacebisi ngebhayisikile abafumanekayo ukukunceda wenze ukhetho olufanelekileyo lwezincedisi zebhayisekile yabantu abadala. Unoku-odola zombini kwivenkile nakwi-intanethi. Unokubuza malunga nokuthengisa okanye izaphulelo kunye nexesha lokuthenga kwakho ngelo xesha.
Ukufumana ibhayisekile efanelekileyo ilungele ukutshintsha kwemfuno zakho njengomntu omkhulu kunokuba yinkohliso. Cinga ngokuthuthuzela kwakho kunye nezinto oceba ukuzenza ngebhayisikile yakho ukukunceda ukhethe. Ukuba sele unayo ibhayisekile, ukufumana izincedisi eziluncedo kunokunceda ukwenza ibhayisekile yakho yangoku ukuba ibentofontofo nokuba ukhonaukukhwela ibhayikhi entabeni, ukuya emsebenzini, ukuhamba ngeebhayisikile ezindleleni, okanye ukukhwela nje ukuya kuqeqesho lwe-cardio olunefuthe eliphantsi.
Ukufumana izixhobo ezikhulu zebhayisekile
Nokuba ungumkhweli onomdla okanye ukhwela nje kancinci rhoqo, ukufumana izinto ezintle kunokuwenza lo mdlalo ube mnandi ngakumbi. Thatha ixesha lakho ekufumaneni ezona zinto zilungileyo zebhayisekile zilungele iimfuno zakho kwaye wonwabele lo msebenzi mkhulu, uphantsi wokuzilolonga.
Cocktail Iindlela Zokupheka Ukucoca Imiboniso Yeslides Cheerleading Slideshows Imoto Isiqinisekiso Iqela Uqeshiso
Abantu Abadala Iibhodi Imidlalo
ubona omnye umntu ndisenalo ithuba
yintoni oza kuyinika kwitheko lothethathethwano
ungayifumana njani ulwazi lomntu simahla
buthini ubude obuphakathi kwenkwenkwana eneminyaka eli-13 ubudala
yenzani ngamehlo aluhlaza blonde iinwele